Wakaaladda caalamiga ah ee hubka kiimikada oo diiday codsi Ruushka ka yimid - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, EPA/ YULIA SKRIPAL/FACEBOOK
Basaaska iyo intantiisa la sumeeyey
Baadheyaal ka socda wakaaladda caalamiga ah ee hubka kiimikada ah, ayaa ku gacan saydhay codsi Ruushka ka yimid oo ahaa in khubaro kiimikada ku takhasusay oo dalkiisa ka socdaa ay ka qayb qaataan baadhitaanka cusub ee lagu hayo dhacdadii sumaynta ahayd ee Salisbury.
Codbixintii loo qaaday codsigaa Ruushkana waxa ka soo baxay lix cod oo lagu ogolaaday iyo shan iyo toban lagu diiday, sidaas ayaanay ku timid diidmada dalabkii Ruushku.
Wasiirka arimaha dibada Ingiriiska, Boris Johnson, oo codbixintaa u riyaaqay ayaa waxa uu yidhi, marka hore ba Moscow ujeedo keliya ayay lahayd, taas oo ah in ay shareerto xaqiiqada oo ay marin habaabiso shacabka. Waxaanu intaa ku daray, in beesha caalamku arintaa ka garatay xeeladaha Ruushka sidaana lagaga hor tagay isku daygiisii ahaa inuu mijo xaabiyo baadhitaanka caalamiga ah ee socda.
Danjiraha Ruushka u fadhiya wakaaladda caalamiga ah ee hubka kiimikada, ayaa isaguna su'aal geliyey heelanaanta Ingiriiska ee ah in wixii baadhitaankaa ka soo baxa uu soo bandhigo. Baadhitaanka uu tilmaamayaana waxa weeyi ka lagu hayo dhacdadii bishii hore lagu sumeeyey basaas hore oo Ruush ah iyo inantiisa.
Dowladda Soomaaliya oo labo shardi ku xirtay keenista Jaadka
Ma dhab baa in Ciidamo Kenyan ah ka qeybgaleen dagaalka Beled Xaawo?